အဆိုပါရှာပုံတော်အတွက်လောက၏ညစ်ညမ်းရာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်အလှန်နှင့်ရှိုင်းတတ်နိုင်သမျှ။ ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းမပြည့်စုံမှန်ကန်အသက်တာ၌။ အဆောစိတ်ကူးယဉ်သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်၊နှင့်ပျော်မွေ့ချင်လျှင်သင်အပေါ်အများကြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းအဆင့်၊အစားအသစ်ဂိမ်းများအတွက်စုဆောင်းခြင်း၏၃D သင်ျ။ ဒီဆိုက်ကိုပဲစတင်ခဲ့ပြီးလာအဖြစ်ပိုကောင်းအခြားရွေးချယ်စရာၾကည့္ရႈသည္သင်ျ။, ဟုတ်တယ်၊ရုပ်ရှင်တွေကြီးနှင့်အညစ်ညမ်းသောကြယ်ပေါ်ထားရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လိင်ထားမည်မျှကောင်းသောအဘယ်သူမျှမနေပါစေအသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်၊သူမလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှသောသင်တို့၌စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသူမ၏သမီး Jonny။။
သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားယုံကြည်စိတ်ချ၏သင်ျစွန့်စားမှု၊နှင့်ထိုထက်ပို။၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံအဖြစ်အပျက်ကနေတစ်ဦးပထမဦးဆုံးလူတစ်ဦးအမြင်တော့လိုအပ်ဖို့ထွက်စစ်ဆေးအစု ၃D သင်ျ။ ငါပြောပြသွားတာပါသင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အဆိုပါဂိမ်းအတွက်စုဆောင်းခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားလုံးအတွက်လာမယ့် HTML၅။ အစမှအဓိပ္ပါယ်ကောင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်အပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူ၊အများကြီးလုပ်ရပ်တွေကိုယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်လိင်နှင့်ဇာတ်လမ်း unravels။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ရဲ့ကြောင်းကိုအထူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းသည်သူတို့နှင့်အတူလာ။၃D။, နှင့် ၃D ဂိမ်းများကို HTML၅ အရူးလက်တွေ့ကျကျ။ သူတို့ကြည့်ရှုလို့သူတို့အတွက်အဘွယ်နည်းကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သင်အတွေ့အကြုံအများဆုံးလက်တွေ့ကျကျနှင့်အလှန်သင်ျအစည်းအဝေးများအပေါ်ဝဘ်ပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏။ ပဲလာ!
အတူဒါကြောင့်အများအပြားဂိမ်းများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ငါတို့သည်လည်းပူဇော်နိုင်အောင်အများကြီးအမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာ၏။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေအရာကိုမိသားစုဝင်ချင်ပါတယ်မင်း၊အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူမိခင်၊သမီးနဲ့အစ်မ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းအင်္ဂါလိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူ aunties နှင့် grannies၊ကျနော်တို့တောင်မှများလိင်သင်ျဂိမ်းသို့ဆိုရင်တော့။ ဒါပေမယ့်တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်တို့လိင်တူမိသားစုလိင်ဂိမ်းများ။
အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းလည်းကြွလာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများလိင်ဂိမ်းများ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှိသည်နှစ်ခုရဲ့အဓိကအမျိုးအများလိင်ဂိမ်းများ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ငါတို့သည်လိင် simulators၊အရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်လိင်အရေးယူအဓိက။ ဒီဂိမ်းမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်အရှုပ်ထွေးဆုံးလိင်ဂိမ်းအကြောင်းသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊သင်သည်လည်းနိုင်စိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကောင်အချို့အတွက်ဒီဂိမ်း။ အကိုစိတ်ကြိုက်ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကူးပြောင်းဖို့မည်သူမဆိုသင်လိုချင်တာအဖြစ်တစ်ဦးနံပါတ်များအတွက်ညစ်ညမ်း simulators။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ကျွန်ုပ်တို့သည်အတူလာဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းစိုက်တွေအများကြီးပေါ်။ ငါခေါ်သည်ဤဂိမ်းစိတ်ကူးယဉ် simulators၊သူတို့ကသင်အရာအားလုံးကိုမေတ္တာအကြောင်းသင်ျ။ ဒါကြောင့်ပဲလိင်မယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ။ ကိုယ့်လိုပဲအကောင်းလိင်သည်၊ဒီဂိမ်းလည်းအရှုပ်များ၊ပုံစံအတွက်ဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းသင်ျကွုံတှေ့ရ။ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊အားလုံးအသှေးနှင့်ပဥ္စရှိခြင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ပထမဦးဆုံးမိသားစုနခ်စ္သူျစွန့်စားမှု၊အစေသည်ကားအဘယ်သို့လိင်ဂိမ်းများအလမ်းကောင်းအလတ်အရုပ္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္အသင်ျစိတ်ကူးယဉ်ထက်ၾကည့္ရႈသည္။
ကစားအားလုံး ၃D သင်ျဂိမ်းများအတွက်အခမဲ့
ဟုတ်ကဲ့၊သင်ဖတ်ဖူးတဲ့မှန်သော! ကျနော်တို့ကိုပူဇော်အားလုံးသည်ဤဂိမ်းအခမဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါကြောင်းသိလို့ဘယ်လောက်အဆိုပါညစ်ညမ်းကမ္ဘာအလုပ်လုပ်တယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ဒီဆိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပန်းစားအခမဲ့လိင်ပြွန်နှင့်လူတွေကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာသည့်အခါသူတို့လိုအပ်အချို့ကျေနပ်မှုအပေါ်အင်တာနက်အစားပေါ်သွားညမ်းလွှင့်ထုတ်ပလက်ဖောင်းရုပ်ရှင်များကြည့်ဖို့။ နှင့်အဘို့အ၊ကျနော်တို့အတူတူပင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြတယ်ရှေ့ဆက်လွယ်ကူပြီးဖြောင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကနေသင်ရရှိအခမဲ့လိင်ပြွန်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းတူညီသောကြော်ငြာတွေရှိသည်။ အများစုမှာညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များများလည်းအများအပြားကြော်ငြာတွေသူတို့လွတ်လပ်သည့်အခါ။, နှင့်ရင်ဆိုင်လိုက်ရအောင်၊လူများရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အယံအဖွဲ့ဝင်များအတွက်လိင်ဂိမ်းပလက်ဖောင်း။ ဒါပေမယ့်ကြော်ငြာတွေဘယ်သို့လူအကွာကနေကစားလိင်ဂိမ်းများ။ မတူခံစားရထွက်ခွာကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကြောင့်တာနက်နှင့် redirection လင့်များ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့လိင်ဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုမလာနှင့်အတူဝှကျထားလှည့်ကွက်သို့မဟုတ်မည်သည့်နှောင်ကြိုးမဲ့။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်အားလုံးသည်ဤဂိမ်းများအတွက်ငွေကြေးအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ကိုယ့်လာကစားတိုင်းအချိန်သင်ခံစားရကြော!